नुन चिनी पानीको झटारो— संस्था, सस्ता र सक्दा - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
हामीमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै अझ भनौं एक वा सोभन्दा बढी संस्थासँग आबद्ध छौं । जसले जे–जसरी अर्थ लगाए पनि वा अर्कोलाई मूर्ख बनाउन खोजे पनि, मलाई कुनै पद चाहिँदैन भने पनि, मलाई पदका लागि मरिमेट्नु छैन भनी लेखे पनि, हामीमध्ये अधिकतम् मानिसहरूमा पदलोलुपता प्रष्ट देखिन्छ ।
हुन त गलामा खादा र छातीमा ब्याच बोकेर मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुको मज्जा नै बेग्लै ! त्यति विभूषित भएपछि त्यसका शान नै अर्को भन्छन् अमेरिकाका धुर्मुस काका । त्यहीमाथि फोटो फेसबुकमा पोष्ट्याएपछि आउने बधाई र शुभकामनाका कमेन्टले उनको भाउ थप चुल्याइदिन्छ । अर्को चोटि उनलाई भेट्दा होस पु¥याएर मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ । अझ कमेन्टकर्तामध्ये कोही नेता वा नेतागिरी गर्ने एक प¥यो भने त्यो त उसका लागि नेपाल आइडलमा गोल्डेन माइक पाएबराबर हुन्छ ।
बहुदल आएपछि नेपालमा बोर्डिङ स्कुल खुलेजस्तै अमेरिकामा खहरे उर्लेसरी नेपाली संस्था दर्ता भएका छन् । काम ग¥यो–गरेन कसलाई सरोकार ? पदका लागि खुलेका संस्थाबाट कामको आशा गर्ने नै मूर्ख । कुरा गर्नै पर्दा ८ सयभन्दा बढी विभिन्न राजनीतिक दल, जात, जिल्लाविशेष, भेग र स्वार्थ जोडिएका संस्थाहरू छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ । न्यूयोर्क एक्लैले एक शतकभन्दा बढी संस्थाहरुको भारी बोकिरहेको छ । तिनीहरुका एक–एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनि पदाधिकारी । प्रति संस्था १० कार्यसमिति सदस्य गणना गर्दा हरेक दुई वर्ष कार्यकाल मान्ने हो भने ६० हजार त पदाधिकारी मात्रै हुने रहेछन् । छ्यासछ्यास्ती चोकैपिच्छे भेटिने हुँदा मैले शीर्षक नै सस्ता भनेर जोड्न बाध्य भएँ । गज्जबको कुरा त के छ भने तीमध्ये केहीले संस्था आफ्नो गोजीबाट सञ्चालन गरेका हुनाले स्वयम् सदाबहार अध्यक्ष ।
यी संस्थाहरुको अगाडिको पाटो केलाउने हो भने संस्था खोलिसकेपछि वा जिम्मेवारी लिइसकेपछि केही न केही त गर्नै प¥यो नत्र फेसबुकमा के पोस्ट्याउने ? अलिकति खर्च गर्नै प¥यो । चिया, खाजा, दारु, सितन पनि खुलाउनै प¥यो । संस्थाको गतिविधि र माइलेज नबनाए अर्को साल स्मारिका छपाउँदा कुन फोटो छाप्ने ? पिकनिक मात्रै गरेर भए पनि फोटो जम्मा पार्छन् । यस्तो परिस्थितिमा एकातिर समय दिन सक्नुपर्दछ भने अर्कोतिर गोजी रित्याउन पनि तयार हुनुपर्दछ । जसको प्रत्यक्ष असर भने परिवारमा परिरहेको हुन्छ । घरमा जाँदा श्रीमतीको किचकिच, बालबच्चालाई धेरै समय दिन नसक्दा कुलतमा लाग्ने मात्र होइन, मानसिक समस्याका शिकारसम्म भएका उदाहरण देख्ने–सुन्ने गरिएको छ । त्यसैले पारिवारिक, आर्थिक, व्यावहारिक हिसाबले भ्याउँदा सक्दा मात्र संस्थामा आबद्ध हुनु ठीक हो भन्ने नुन चिनी पानीको ठहर छ ।
छड्के पाटोबाट हेर्ने हो भने केही संस्थाहरुले सामाजिक सेवाका काम पनि नगरेका होइनन् । नेपाली भाषा कक्षा सञ्चालन– खैर उपलब्धि केही नभए पनि । विभिन्न दैविक बिपत्तीहरुमा सहयोग– खैर केही गोजीमा राखे पनि । नव आगन्तुकहरुलाई सहयोग– खैर भोटका लागि पासो थापे पनि । आदि राम्रा काम पनि भएका छन् । भलै उद्देश्य सामाजिक सञ्जालमा देखाउन र सस्तो लोकप्रियता कमाउन मात्र किन नहोस् !
गुदी कुरो, संस्थामा आबद्ध बन्दा विधान पढौं । निष्ठावान भएर लागौं । सस्तो लोकप्रियताको खोल नओढौं । पारिवारिक र आर्थिक अवस्थाले भ्याए मात्र होम्मिऔं भन्ने नुन चिनी पानीको निष्कर्ष छ ।